China 3-Ply Synthetic Roofing Rootiing Weelkoolka iyo soosaarayaasha | ShiningPlast
Si loo siiyo xulashooyin badan oo kala duwan macaamiishayada. Waxaan sidoo kale naqshadeyneynaa 'ShiningPlast 3-Ply underlayment' oo leh culeys fudud oo ku dhejisan waxyaabo gaar ah oo lagu daro walxaha loo yaqaan 'antstomer antiskid' iyo walxaha dhameystirka dusha sare si ay u gartaan kala go 'sare oo u dhexeeya.
Miisaan: 80 ~ 150 gsm
Qaabka: 4 lakab - SBPP + LDPP + HDPP + LDPP
Xidho: Biyaha loom iyo jiirka wareega
Midab: Sida macaamiishiiba ay ku jiraan SBPP
Cabbirka: 48 '' X 250 '42' 'X 250'
: Is-isku-Darka ayaa la heli karaa
3-Ply sidoo kale wuxuu leeyahay qiyam heer sare ah oo heerkiisu yahay ASTM oo loogu talagalay tensile iyo ilmada. Alaabooyinkayaga dul-saaridda ayaa si fiican uga gudbi karaya tijaabada ilmada.
Iyada oo la isticmaalayo xasiliyaha UV, ma aha inaad ka walwasho muujinta waqtiga dheer inta dhismaha la joogo.
Dhammaan noocyada dul-saarka ah waxaa soo diyaariyey Mareykanka ama heerka loo yaqaan 'EN (Customization waa la heli karaa).
1. Ku dheji warqadda ama fiilooyinka 'PP'.
2. Xirmooyin qaas ah oo loo habeeyey inay si adag u xajiso inta la dirayo
3. Soo bandhigid qaas ah oo loo qaabeeyey (US ama EN Standard Pallets).
4. Waxaa lagu adkeeyay xirmooyin PE.
·Raagaya: Daawaynta 'ShiningPlast Underlayment' waa Mid Xoog badan oo Waara. Gaar ahaan waxay leedahay jeexitaan xoog leh. Waxay ka ilaalin doontaa roobaadka inuu ka baxo qaybta jeexan.
·Fudud: 'ShiningPlast Synthetic Underlayment' wuxuu lahaa hanti khafiif ah taasoo fududaynaysa in lagu qaado rookaha.
·Antiskid: Qaab qaabeyn qaas ah / qaab dhismeedka ah ee lakabka SBPP si kor loogu qaado jabka. Waxaan sidoo kale u adeegsanaa waji-dhammeystiray gloss-dhammeystiran oo lagu daro walxaha khaaska ah ee loo yaqaan 'elastomer' si loo kordhiyo isku dhaca inta udhaxeysa sagxadda dusha sare iyo dharka. Waxaan ka dhigeynaa labada dhinacba halista ah dulsaarka 'antiiskid' illaa jaalahaaga.
·Caddaynta Cimilada: Tan iyo wajiga bilawga fidinta yarn, waxaan bilaabeynaa inaan daryeelno canug yar oo yar annealing iyo sawiro, waxaanna ku duubnaa looms horumarsan, ilaa T-Die Coating ilaa ay ka dhamaato, waxaas oo dhanna waxay xaqiijinayaan heerka kalasaarashada wanaagsan , tensile / jeexitaan wanaagsan iyo burburin wanaagsan. Badbaadadaada faaska ayaa la hubin doonaa xitaa inta lagu jiro dabaylaha adag ama cimilada xun.
·Caddeynta ilmada: Kaliya maahan meelaynta si buuxda loo kala fidiyey, qulqulka ShiningPlast wuxuu noqon doonaa caddeyn ilmada leh oo ku saabsan xoogga ilkuhu.
·Biyo ma galeen: Si ka duwan godad aad u badan iyo dheellitir u dhexeeya cajalado, ShiningPlast tayo saqafka sare ah ayaa ka dhigaysa hal inji oo kasta oo dharka ka mid ah oo biyuhu ku jiraan.
·UV-Resistant: Waxaan u isticmaalnay daaweynta ugu fiican ee UV iyo xasilinta si loo xaqiijiyo xasilinta inta lagu gudajiro mudada dheer ee UV.
·Diirka iyo Caloolka dhajiska ee Stick ayaa la Heli Karo
Tiknoolajiyadda kulul ee dhalaalaysa kulul waxay siisaa macaamiisheenna ikhtiyaar dheeraad ah / shaqo taas oo ah is-adkeysi iskeed ah. Xarkaha ku dhejisan ayaa ah sida loo codsado.
Hore: Daboolida anti-barafoobay tayada ugufiican - Nadiifinta Dhab Shisheeyaha - ShiningPlast
Xiga: 2-Qaybta Ply House